Ekoadaoro: Ho anisan’ireo zava-mahatalanjona miisa 7 vaovao eto amin’izao tontolo izao ny nosy Galápagos · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2018 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, 简体中文, 繁體中文, English
(Marihina fa tamin'ny 16 Jona 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nahatafiditra kandidà roa amin'ny fihodinana faharoa hifidianana zava-mahatalanjona miisa fito eto amin'izao tontolo izao tamin'ny fifaninanana antserasera i Ekoadaoro : ny nosy Galápagos (ao amin'ny vondrona B, sokajy “nosy”) sy Amazonia (ao amin'ny vondrona F, sokajy “ala, valanjavaboarim-pirenena sy ny valan-javaboary natoraly”). Efa mahazatra ny ankamaroan'ny olona kokoa ny Galápagos, vondronosy ahitana karazana nosy maro miisa 125, izay avy amin'ny volkano. Mandrakotra ny 97%-n'ny toerana ao amin'ny faritra ny valanjavaboari-pirenena, izay nosokajiana ho faritra voaaro noho izany.
Miavaka noho ny karazam-biby ao aminy ity faritry ny Oseana Pasifika ity. Ohatra, hita ao i George le Solitaire, sokatra goavambe iray 70 taona izay tsy afaka mahita namana mitovy aminy. Izy irery sisa no hany biby amin'ny karazany mbola velona ary mety ho foana noho izany. Misy ihany koa ny karazam-biby hafa izay mety ho tandindonin-doza ao an-toerana toy ny géospize modeste na ny iguane rose Maro amin'ireo karazam-biby ao Galápagos ireo no nampiasain'i Charles Darwin tamin'ny fandalinany momba ny fivoaran'ny biby.
Nifampiarahaba tamin'ny vokatra tsara voarakitra tamin'ity fifaninanana ity ny Ekoadaoreana. Nanolotry ny governemanta ity fahombiazana ity ho an'ny Minisitry ny Fizahantany, Veronica Sion, sy ny tolona nataony mba handinihana indray ny fanapahan-kevitra noraisin'ny UNESCO tamin'ny taona 2007 mba hampidirana ireo nosy Galápagos ao amin'ny lisitry ny vakoka iraisam-pirenena tandindonin-doza.
Fampahalalana ho an'ireo mpitsidika, nosoniavin'ny Komandàn'ny tafika an-dranomasina faharoa. Saripika nampiasana lisansa Creative Commons, http://www.flickr.com/photos/jasonpearce/
Bilaogera Ekoadaoreana maro no nirehareha tamin'ireo nosy ireo, anisan'izany i Waldemar Verdugo Fuentes avy ao amin'ny bilaogy Islas Galápagos, Reserva de la Humanidad. Nitantara ny diany faharoa tany amin'ireo nosy Galapagos izy ary nahamarika ny fiovana vokatry ny fitomboan'ny mponina sy ny fizahantany.
Otro problema igualmente grave es la migración de colonos del continente, que son atraídos por el “dólar fácil” del turismo. La tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Galápagos asciende a 6 por ciento anual, la más alta de Ecuador (promedio nacional 2.08). Actualmente, 16 mil habitantes pueblan la región. Demasiados colonos para unas islas que exigen una rigurosa disciplina de vida. Los asentamientos urbanos conllevan la sobreexplotación de los recursos marinos, la acumulación de desechos, introducción de enfermedades, plantas e insectos, avispas, babosas, pulgones, 21 especies de vertebrados foráneos (chivos, perros, cerdos, gatos, ratas) y 261 plantas introducidas desde el continente, como la guayaba y la
Ny fahatongavan'ireo mponina vaovao avy any amin'ny kaontinanta, izay voasariky ny tombontsoa entin'ny fizahantany no olana lehibe iray hafa. Mitombo 6% isan-taona ny mponina ao Galápagos, izay salanisa avo indrindra ao amin'ny firenena, 2,08 ny salanisa ankapoben'ny firenena. Amin'izao fotoana izao (2009), manana mponina miisa 16.000 ny faritra. Be loatra izany ho an'ny faritra iray izay tokony ilaina ny famehezana ny mponina sy ny fananana ny fomba fiainana manaja ny tontolo iainana. Mitarika ho amin'ny fitrandrahana be loatra ny harena an-dranomasina sy ny fanangonana fako io fitomboana io; Mitondra aretina, zavamaniry, bibikely, tantely, dita, parasy, sns ny mponina vaovao. Tombanana ho 21 ny karazam-biby tsy tompotany (osy, alika, kisoa, saka, voalavo, sns.) Ary zavamaniry miisa 261, toy ny goavy sy ny serizy no nentina avy any amin'ny kaontinanta.
Honahona feno sokatra, famantarana ny nosy ao amin'ny nosy Santa Cruz any Galápagos. Sary nampiasana lisansa Creative Commons, http://www.flickr.com/photos/kathb
Mitanisa ireo nosy, izay mifaninana amin'i Galápagos i Carlos Jordana, mpanoratra ao amin'ny bilaogy Tecnodatum ary nanamafy ny maha zava-dehibe ny fiantraikan'ny fifantenana ny nosy ho anisan'ireo zava-mahatalanjona vaovao manerana izao tontolo izao ara-toekarena. Na izany aza, mino izy fa hitombo ny fizahantany, ary manantena fa tsy hanimba ireo nosy izany.
Nanaraka ny fizotry ny hetsika ary nandrisika ny mpifidy hifidy ny Vondronosy Galápagos i Xavier Loor. Manantena ny fanohanan'ny mpamaky azy izy mba hahazoana fandresena. Tao anatin'ny herinandro monja, niakatra ho laharana voalohany tao amin'ny vondrona B (Nosy) ny Galápagos raha tany amin'ny laharana faha-8 no nisy azy tamin'ny voalohany, ny nosy Cocos (Kôsta Rika) sy ny nosy Ometepe (Nikaragoa) no manaraka azy.
Na dia teo aza ny hafaliana tamin'ny fahombiazan'ny Nosy Galapago, nanome fanamarihana mba hamantaran'ny rehetra fa hita ao amin'ny fifaninanana ihany koa i Ekoadaoro sy ny faritra Amazôna i Ayllyn N. Franco ao amin'ny bilaogy Bludger Hecha Letra. Mihevitra izy fa tokony hanohana ny fireneny ny Ekoadaoreana ary nanoro azy ireo ny fomba hifidianana.
Fantatra ny tapaky ny volana Jolay 2009 ireo tafakatra dingana famaranana miisa 77 tamin'ny toerana tsara tarehy indrindra tsara ho tsidihana eto amin'izao tontolo izao ary notendrena tamin'ny taona 2011 ireo mpandresy. Afaka nifidy teto ireo olona liana tamin'ny fanohanana ny nosy Galápagos ary afaka nanao izany teto ireo izay te-hanohana ireo firenena miisa sivy, anisan'izany i Ekoadaoro, ao anatin'i Amazonia.